အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု ရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန် လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆန် - Yangon Media Group
အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု ရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန် လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆန်
အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန် လူတိုင်းတွင်တာဝန်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးကိုနီနှင့် ဦးနေဝင်းတို့၏ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သောသဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားကြောင်းသိရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူ ပြုအဖွဲ့ဝင် ဦးကိုနီနှင့် အငှားယာဉ် မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ ကျဆုံးခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်း ဆီတွင်ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးကိုနီသည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို့သွား၍ ပြည်သူများအား ဥပဒေရေးရာများကို အသိပညာနှင့် ဗဟုသုတများပေးဝေခဲ့သူဖြစ် ကြောင်း၊ ဦးနေဝင်းမှာလည်း သမ္မာအာဇီဝကျကျ ရှာဖွေကျွေးမွေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့နှစ် ဦးစလုံးသည် အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှု၏ ဘက်တော်သားအဖြစ် အသက်ပေးခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူအများစုက တန်ဖိုးထားလေး စားကြကြောင်း သဝဏ်လွှာ၌ ဖော် ပြထားသည်။ ယင်းအပြင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် လူသေသော်လည်း နာမည် မသေသေးသူများ ဖြစ်ကြကြောင်း၊ အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုရှိ သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေရန် လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း၊ အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ထွန်းပေါ် ပေါက်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီခိုင်မာစေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း သဝဏ်လွှာတွင်ပါရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီခိုင်မာတောင့်တင်းသည်နှင့်အမျှ အမျိုးသားရင်ကြား စေ့ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများကိုများစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့်အပြင် မှီတင်းနေထိုင်သည့် နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် လူကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ခြင်းအပေါ် နားလည်ပေးကြရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကသဝဏ်လွှာတွင် မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။ ဦးကိုနီနှင့် ဦးနေဝင်းတို့အတွက် အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုကို တစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဝင် ဦးထွန်း ကြည်က ပြောသည်။ ”ဒီအခမ်းအနားကပေးချင်တဲ့ သတင်းစကားနဲ့ တောင်းဆိုချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာဦးကိုနီနဲ့ ကိုနေဝင်းတို့အတွက် အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှု အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲ ဖော်ဆောင်ကြဖို့ အလေးအနက်ထားတိုက်တွန်းလိုပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါပွဲကို ဘာသာပေါင်းစုံမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးနယ် ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံတကာသံတမန်များလည်းတက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် နီပေါသမ္မတ ဖိတ်ခေါ်
ဒေါက်တာ အေးမောင်နှင့် စာရေးဆရာ ဝေဟင်အောင် တို့ကို ရသေ့တောင်မြို့တွင် ပထမဆုံး အကြိမ် ရုံးထု?
ရွှေလက်ဖြင့် ခေါ်လည်း မလာ
ကလေးသူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်??
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုတွင် လက်နက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒုရဲမှူးတစ်ဦးကို စစ်ဆေး၊ တရားလိုပြသက်
ယူရိုငွေ ၁ဝ သန်းဖြင့် ကျိုင်းတုံခရိုင် တောင်ပေါ်ကျေးရွာ ငါးအုပ်စု၊ တာချီလိတ်ခရိုင်နှင့် မု?